Isimangaliso sikaYesu Ukutya ama-5000 Kubonisa ukuba unguMesiya
Ngexa wayehamba ubulungiseleli bakhe, uYesu Kristu wafumana iindaba ezimbi. UYohane uMbhaptizi , umhlobo wakhe, umhlobo wakhe, nomprofeti owayememezela njengoMesiya, wayenqunywe ikhanda nguHerode Antipas , umbusi waseGalili nePereya.
Abafundi bakaYesu abali-12 babesandul 'ukubuya eluhambweni lobuthunywa bevangeli ababemthumelele. Emva kokuba bemxelele konke abakwenzileyo nokufundisa, wabathabatha kunye naye emkhunjini oLwandle lwaseGalili waya kwindawo ekude, ukuphumla nokuthandaza.
Izihlwele ezininzi zabantu kuloo ndawo zakuva ukuba uYesu wayesondele. Baleka ukuba bambone, beza nabahlobo kunye nezihlobo zabo abagulayo. Xa isiqhekeza sifikile, uYesu wabona onke amadoda, amabhinqa nabantwana waza waba nemfesane kubo. Wawafundisa ngoBukumkani bukaThixo waza waphilisa abo babegula.
Ekhangela isihlwele, esabalwa ngamadoda angama-5 000, engabalwa ngabafazi nabantwana, uYesu wambuza umfundi wakhe uFilipu esithi , "Siya kuthengela phi na isonka ukuze aba bantu badle?" (Yohane 6: 5, NIV) UYesu wayesazi oko wayeya kukwenza, kodwa wabuza uFilipu ukuba amvavanye. UFilipu waphendula wathi, nokuba umvuzo weenyanga ezisibhozo wawungeke ukwanele ukunika umntu ngamnye ukuluma kwesonka.
UAndreya, umninawa kaSimon Petros , wayenokholo kuYesu. Wazisa phambili inkwenkwana eyayinezonka ezintlanu zezonka zebhali kunye neentlanzi ezimbini ezincinci. Nangona kunjalo, uAndrew wazibuza ukuba oko kunokunceda njani.
UYesu wayala ukuba isihlwele sihlale phantsi ngamaqela angamashumi amahlanu.
Wathabatha izonka ezisihlanu, wabheka phezulu ezulwini, wabonga uThixo uYise, wazinikela kubafundi bakhe ukuba basasazwe. Wenza okufanayo kunye neentlanzi ezimbini.
Wonke umntu-amadoda, abafazi kunye nabantwana-badla ngokubanzi njengoko befuna! Ngokumangalisayo uYesu wandisa iintlanzi kunye neentlanzi kangangokuba kwakukho okungaphezulu kokwaneleyo.
Emva koko waxelela abafundi bakhe ukuba baqokelele i-surplus ukuze kungabi nantoni na. Baqokelela ngokwaneleyo ukuzalisa iibhasikiti ezili-12.
Isihlwele saqhaqhazelwa ngalummangaliso kangangokuba baqonda ukuba uYesu wayengumprofeti owayethembisiwe. Ukwazi ukuba bafuna ukumnyanzela ukuba abe ngukumkani wabo, uYesu wabaleka kubo.
Amanqaku anomdla kwiNdaba kaYesu Ukutya i-5000:
• Lo mmangaliso xa uYesu atya ama-5000 kubhalwe kuzo zonke iincwadi zeVangeli , kunye neenkqubela ezimbalwa kwiinkcukacha. Yisiganeko esahlukileyo ukususela kuma-4,000.
• Kuphela kwamadoda ayebaliwe kweli bali. Xa abafazi kunye nabantwana befakiwe, isihlwele sasingaba ngu-10,000 ukuya kuma-20,000.
• La maJuda aye "alahlekile" njengabo okhokho abaye bajikeleza entlango ngexesha leEksodus , xa uThixo wanikela imana ukuze abondle. UYesu wayemkhulu kuMoses kuba akazange anike kuphela ukutya okwenyama kodwa ukutya kokomoya, njengesonka "sobomi."
• Abafundi bakaYesu bagxininise ingxaki kunokuba baxoxe noThixo. Xa sibhekene nesimo esingenakuthenjwa, kufuneka sikhumbule "Kuba akukho nto ayinakwenzeka kuThixo." (Luka 1:37, NIV )
• Iibhasikiti ezili-12 zezinto ezisele zingabonakalisa iintlanga ezili - 12 zakwaSirayeli . Bathi xelela ukuba uThixo akayena nje umniki-nkonzo onobubele, kodwa ukuba unemithombo engenamkhawulo.
• Ukondla ngokumangalisayo kwesihlwele kwakunomnye uphawu lokuba uYesu unguMesiya. Nangona kunjalo, abantu abazange baqonde ukuba wayeyinkosi yokomoya kwaye wayefuna ukumphoqa ukuba abe yinkokeli yempi eya kubatshabalalisa amaRoma. Yingesizathu sokuba uYesu abaleke kubo.
UFilipu noAndreya babonakala belibale yonke imimangaliso uYesu ayeyenzile ngaphambili. Xa ujamelene neengxaki ebomini bakho, ukhumbula indlela uThixo akuncede ngayo ngaphambili?
Mateyu 14: 13-21; Marko 6: 30-44; Luka 9: 10-17; Yohane 6: 1-15.
• I- Index ye-Summary Index
Kutheni Ukhumbula Imibhalo YeBhayibhile?
Iphrofayili yeMbali kunye neKhathalelo yeNkonzo
Archaeopteris - Umthi Wokuqala "Weqiniso"
Inkqubo ye-Independence yase-Afrika yaseMzantsi Afrika
I-Floyd Mayweather Jr. I-Fight-by-Fight Career Record
I-5 ephezulu kufuneka ibone i-Movie yeGhibli
Ziziphi 'X-Out' zeGolofu zeBhola kwaye ngaba 'Zomthetho' phantsi koMthetho?
Ngubani owayekade engumGolfer waseMelika ukuThola iBritish Open?
Imbali yeTeddy Bear